'Uyaphi, uBernadette' Iimpazamo ezibi nangona uCate Blanchett ezama - Iimuvi
Eyona Iimuvi UCate Blanchett's 'Uya Kuphi, uBernadette' Ukusebenza kwakhe yeyona nto ichaphazelekayo ukuza kuthi ga ngoku
UCate Blanchett's 'Uya Kuphi, uBernadette' Ukusebenza kwakhe yeyona nto ichaphazelekayo ukuza kuthi ga ngoku
UCate Blanchett ungene Uyaphi, uBernadette .Imifanekiso ka-Annapurna
Phantse kwisiqingatha sokuqhelaniswa kukaRichard Linklater kwinoveli ethengisa kakhulu kaMaria Semple Uyaphi, uBernadette , injineli yobukrelekrele bokufakelwa egama linguElgin (uBilly Crudup) uchaza indlela aziphethe ngayo umfazi wakhe kugqirha wengqondo. Emva kokuva into ayithethayo, ugqirha, odlalwe ngumfazi webhanyabhanya ixesha elide wonke umfazi uJudy Greer, uxilonga umfazi engaboniyo njenge-agoraphobic, uxinzelelo kunye ne-manic, kunye nokulwa nobukhulu kunye noxinzelelo ngelixa kunokwenzeka ukuba azibulale.
Ewe ngelo xesha, thina kubaphulaphuli sele sichithe ixeshana kunye nomntu obhinqileyo, uCate Blanchett kaBernadette Fox. Ukuqhushumbisa rhoqo ibhombu ye-quirk, uBlanchett udlala uBernadette ngokungathi unayo yonke le micimbi kunye nokumbalwa okuthe kratya kumgangatho olungileyo. Kukusebenza okuphezulu kakhulu, apho uBlanchett ethatha iintlungu ezinkulu ukolula izikhamiso zamagama awawathethayo ngokungathi udlala ngetyuwa yamanzi. Ngumsebenzi ophumeleleyo ophumelele uOscar ukuza kuthi ga ngoku, nto leyo ethetha inyani xa ucinga ukuba sele edlalile bobabini uKatherine Hepburn noBob Dylan.
BONA KWAKHO: 'Imfanyekiswe kukuKhanya' Ibamba umphumo weNkcubeko yePop Enokuba nayo kwiNgcono yayo
Kodwa njengokuba kunzima kwaye kugqithise njengokuba ukusebenza kukaBlanchett kunokuba yinto, yenye yezinto ezimbalwa ezinomdla eziqhubekayo kolu misfire lusizi kwaye lugqithisile.
Ekubaliseni ibali lomntu owayesisityebi nongafanelekanga owayengummeli kaMacArthur 'Genius' Grant ngoku ochitha iintsuku zakhe elwa nommelwane wakhe u-Audrey (u-brittle Kristen Wiig) kunye nokuzibandakanya kunyango lokuthengisa ngokuncedisa, u-Linklater wenza ukuba kungabikho kuthula amaxesha obuntu apho iifilimu zakhe zaziwa kwaye zithandwa. Endaweni yokuba, konke ukuphefumla kutyhalelwe ngaphandle kwebali kwindawo yezenzo ezingenasiphithiphithi kunye namagama agqithisa abalinganiswa ngendlela efanayo nodaba lukaBernadette olunodaka lokuwela kwigumbi lokuhlala lika-Audrey ngexesha lokunyusa ingxowa-mali yesikolo sommelwane.
UYA KUPHI, BERNADETTE ★ 1/2
(1.5 / 4 iinkwenkwezi )
Yeluswa nguwe: URichard Linklater
Ibhalwe ngu: URichard Linklater, uHolly Gent kunye noVincent Palmo Jr. (umfanekiso weskrini); UMaria Semple (inoveli)
Inkwenkwezi: UCate Blanchett, uBilly Crudup, uEmma Nelson, uKristen Wiig, uJudy Greer, uZoë Chao, uJames Urbaniak kunye noLaurence Fishburne
Ixesha lokuqalisa: Imizuzu eyi-130.
Isihloko sibhekisa kukunyamalala kabini. Eyokuqala yenzeke ngaphezulu kweshumi leminyaka ngaphambi kokuba le ngqali iqale, xa uBernadette, owayezimisele ukumkanikazi ngobuchwephesha bokwakha, warhoxa kuye konke kodwa wanikwa ikamva lokuba nguFrank Ghery olandelayo emva kokubandezeleka ngenxa yomsebenzi wakhe wokuqala, kakhulu kukumothusa Umcebisi (uLaurence Fishburne). Okwesibini kwenzeka xa indlela yakhe yokuzitshabalalisa ibamba ingqalelo kungekuphela nje kugqirha wezifo zengqondo kodwa nakwigosa laseburhulumenteni ( Ubuqaqawuli baseMelika 'NguJames Urbaniak) kwaye uyaphuma ngefestile kwisikolo sokungqinga esasisakuba sisikolo ahlala kuso kunye nosapho kunye nokubaleka ukuya eAntarctica, bobabini bebaleka ubunyani bemeko yakhe kwaye mhlawumbi bephinda bengxamisekile.
Intombi ka-Bee eneminyaka eli-15 ubudala ka-Bee (u-Emma Nelson osandula ukufika), ochaza umama wakhe owayezithanda njengomhlobo wakhe osenyongweni, uyamlandela. Ngelishwa abukho obunye ubudlelwane kule filimu-hayi eyabo, hayi obuqobileyo nobuphelayo phakathi kukaBernadette nomyeni wakhe, nditsho nkqu nalawo aphakathi kukaBernadette kunye neenkuku ezikhukhulayo kwindawo ahlala kuyo ezisebenza njengabachasi bakhe-ezivelisa umbane omninzi okanye umfutho. Endaweni yokuba umsebenzi wokulinga le jalopy yokuqhekeka uwele ngokupheleleyo eBlanchett, kwaye ukumjonga uzama ukuthwala umthwalo omkhulu kuyadinisa.
Ndizifumene ndinqwenela ukuba sidibene noBernadette ngelinye ixesha ebomini bakhe, xa wayezazi kakuhle kwaye eyinto engaphaya kweDSM-5 ebonakalisiweyo. Endaweni yoko, iinxalenye zebali lakhe ezinyanzelekileyo zixinene kwisixhobo esibalisayo: kwifilimu ebubuxoki enika iinkcukacha ezibalaseleyo zomsebenzi wakhe owawuthembisile kunye neentloko zokuthetha ezidlalwa nguMegan Mullally, uDavid Paymer noSteve Zahn.
Kukho amaxesha, ngakumbi ukuya esiphelweni (kubandakanya ulandelelwano lwasemva kwekhredithi yasemva), xa ekugqibeleni sibamba umbono wentlama yokuyila elele phantsi kwentsingiselo yebhasikiti yeziqhamo zeBernadette. Kungelo xesha kuphela apho sifumana khona uluvo, hayi kuphela into uBlanchett azama ukuyifezekisa kwindlela yakhe yokuziqhelanisa nomlinganiswa, kodwa kwanokuba obu bunzima bebhanyabhanya obunokuba bubekho.
Sikungcamla ukuvavanywa kweRocket Rocks Fizz's 18 Weirdest Sodas
Ungazikhumbuza njani ngawo onke amaXesha aPhambili avela kwiRoyal Wedding yasePrince William and Kate
'Umpu oPhezulu: UMaverick' u-Star Miles Teller uqinisekisa ukuba iziQinana zeFilimu ziyinyani
Imiboniso ye-'Avatar 'yoopopayi inokuba yinto ebalulekileyo + Isixhobo Esifihlakeleyo
phezulu simahla ukuthandana iisayithi 2016
zhang ziyi ingwe elele phantsi inamba efihliweyo
iplanethi eyangqubana nomhlaba
elona phepha lewebhu lilungileyo kwindalo iphela